छिटो हेर्नुस दाल,अचारमा हालेर धनीयाको पात खानुहुन्छ ? हो’सियार ज्या’न जान पनि सक्छ ! – Dainik Samchar
छिटो हेर्नुस दाल,अचारमा हालेर धनीयाको पात खानुहुन्छ ? हो’सियार ज्या’न जान पनि सक्छ !
March 28, 2021 183
दाल तरकारी या अन्य अचार मसलामा राखेर धनियाको पात सेवन गर्ने सामान्य चलन छ । तर बजारमा गएर पनि चाट वा अन्य खानेकुरा खाँदा धनियाको पात मागेर खाने बानी छ भने
आजै छोड्नुस् सही तरिकाले नधोएको धनियाको पातबाट ख’तरनाक कि’रा (टे’पवर्म) पेटमा पुग्ने र पेट हुँदै दिमाग सम्म पुग्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । टेप’वर्म म’स्तिस्कमा पुगेमा मानिसको मृ’त्यु समेत हुन सक्छ ।
भारतको ब्याङ्लोरस्थित नेशनल इन्स्टी’ट्यूट आफ मेडिकल हेल्थ एण्ड न्यू साइन्स (निमहाम्स) का चि’कित्सकले गरेको शोधमा यस्तो कुरा पत्ता लागेको हो यो संस्थामा रहेको एक मात्र ब्रेन म्यूजियममा म’स्तिष्क सम्बन्धी शोध भैरहेको छ ।
यसै क्रममा धनियाँको पातमा किरा प’त्या’ङ्ग्राको संख्या बढी हुने र त्यस्ता पात राम्रोसँग नपखाली खाएमा निक्कै ख’तरनाक हुन सक्ने चिकि’त्सकहरुले बताएका छन् ।
होटल वा सडकमा राखिएका खानेकुरा खाँदा धनियाको पात भुलेर पनि खान नहुने समेत उनीहरुको भनाइ छ । राम्रोसँग नधोएको धनियाको पात सेवन गर्नु हेलमेट नलगाइ बाइक चलाउनु जस्तै ख’तरनाक रहेको समेत एक शो’धकर्ताले टिप्पणी गरे ।
नोट: “माथि उल्लेखित स्वास्थ्य सम्बन्धि जानकारी विभिन्न अनलाइन तथा पत्र-पत्रिकाहरुबाट साभार गरिएको हो। यी बिषयवस्तुहरु केवल जानकारीको लागी मात्र यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गरेका हौँ। कुनै पनि स्वास्थ्य सम्बन्धि टिप्सहरु प्रयोग
गर्नु भन्दा पहिला अनिवार्य रुपमा चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोला ।” तपाईलाई यो जानकारी कस्तो लाग्यो ? हाम्रो जानकारीहरु अरुलाई पनि देखाउन कृपया सेयर गर्नुहोला । तपाइको एक सेयरले थाहा नभएकाहरुले ज्ञान पाउछन भने हामीलाई पनि सहयोग मिल्नेछ ।
Prevएक व्यापारीले चन्द्रमामा आफ्नो २ महिनाको छोरीको लागि जग्गा किने !
Nextदु’र्घटनामा ज्यान गु’माएकी विनिसाले ‘पारिजात जस्तै बन्नुछ’ भन्दै लेखेकी थिइन यस्तो स्टाटस-
भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या फेरि बढ्न थाल्यो